ढाड दुख्ने १३ कारण-Brtnepal.com
Published on August 10, 2016 at 5:30 am
नेपालीको खानपान तथा जीवनशैलीमा निकै परिवर्तन आइरहेको छ । व्यस्तताका कारण खाने परिकारमा समेत त्यति ध्यान दिइँदैन । जसका कारण विभिन्न रोगले संक्रमण गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय नेपालीमा बढी देखिने स्वास्थ्य समस्यामा ढाडको हड्डी तथा कम्मर दुख्ने पनि हो । यस्तो समस्या २० वर्षे युवादेखि नै देखिन थालेको छ । धपेडी, भारी उचाल्दा स–साना चोट थुप्रिएर यस्तो हुन सक्छ । सुरुमा कम्मर ज्यादै दुख्छ । पछि खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा वा दिसा गर्दा दुखाइ खुट्टासम्म पनि सर्न थाल्छ ।
१. ढाडको हड्डीमा कुनै किटाणुले संक्रमण गरेमा कम्मर दुख्छ । त्यस्तो अवस्थामा ज्वरो आउने, जिउ शिथिल हुनेजस्ता लक्षण हुन्छन् । हाम्रो देशमा विशेष गरी हड्डीमा क्षयरोगका किटाणुले संक्रमण गरेर यो समस्या देखिने गरेको छ ।
२. रजस्वला बन्द भएपछि अधबैँसे महिलामा पनि ढाड दुख्ने समस्या देखिन्छ । त्यस्तै, ढल्कँदो उमेरमा शरीरभित्र हुने हर्मोनको परिवर्तन, पोषणमा कमी र शारीरिक गतिविधिले पनि ढाडको समस्या हुन्छ । यी कुराले हाडको क्याल्सियम र कडापना दिने पदार्थ गुम्न गई दुखाइ बढ्छ ।
३. ढाडको हाड दायाँ या बायाँ बांगो भयो भने पनि कसैकसैलाई कम्मर दुख्ने गर्दछ । विशेष गरी किशोरावस्थामा केटीहरूमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ ।
४. कम्मरको हाडको पछाडिको भाग छुट्टिएको अवस्थामा पनि ढाडको दुखाइ हुन सक्छ । प्राय: गरी खेलाडी, गह्रौँ भारी उठाउनेहरूमा यस्तो समस्या हुन सक्छ । यो कारणले ढाडमा मात्र नभएर खुट्टासम्म पनि दुखाइ हुन सक्छ ।
५. हाडभित्रको ढुंग्रो साँघुरियो भने त्यहाँ रहने नसालाई ठाउँ सानो हुन्छ । सो अवस्थामा कम्मर दुख्ने तथा खुट्टा पनि दुख्छ । ५० वर्ष नाघेका मानिसमा यस्तो समस्या बढी देखिन सक्छ । समतल ठाउँमा हिँड्दा दुख्ने, खुट्टा झमझमाउने गर्छ भने आराम गर्दा केही छिनमा आफैँ ठिक हुन्छ । तर, पुन: हिँड्दा दुख्न थाल्छ ।
६. ट्युमर भएको अवस्थामा पनि कम्मरको दुखाइ हुन्छ । यस्तो समस्या १० हजारमा एकजनालाई हुने मानिन्छ । ट्युमर दुई किसिमका हुन्छन्, हानि गर्ने र नगर्ने । हानि गर्ने चाँडो बढ्छ र दुखाउँछ । यसबाट उत्पन्न हुने कम्मरको दुखाइ लगातार भइरहन्छ । यसको उपचार शल्यक्रियाबाट मात्र हुन्छ ।
७. उमेर ढल्कदै जाँदा कम्मरको हाडको जोर्नी र डिसबीचको प्रयोगले बाथका रूप लिन्छ, जसले दुखाउन थाल्छ । तर, यस्तो दुखाइ सबैलाई नहुन पनि सक्छ । विशेष गरी बिहान उठ्नासाथ र पछि बिस्तारै चाल बढ्दै जाँदा आफैँ ठिक हुन्छ ।
८. ढाडको प्रज्वलन भएर बिस्तारै ढाड नै एकढिक्का भएर कुप्रो पर्ने पनि हुन्छ । विशेष गरी २० देखि ३० वर्षका युवामा यसको समस्या हुन सक्छ । यसको दुखाइ कम्मरको तल्लो भाग, नितम्ब र तिघ्राको पछाडिसम्म पनि फैलिने हुन्छ । विशेषगरी बिहानीपख बढी दुख्छ ।
९. बाथका कारणले पनि ढाड दुखाइ हुन्छ । शरीरको आन्तरिक गडबडीले यसलाई प्रभाव पार्छ ।
१०. कसैकसैलाई ३० वर्षको उमेरपछि डिसमा पानीको भाग घट्छ र लचिलो हुन्छ । ४० वर्षपछि क्याल्सियम पनि थपिन जान्छ र डिस नै हाड बन्न सक्छ । यस्तो हुँदा कसैलाई दुख्छ भने कसैलाई केही पनि हुँदैन ।
११. कहिलेकाहीँ अगाडि निहुरिएको अवस्थामा एकापट्टि बढी निहुरिँदा अकस्मात् झड्का पर्‍यो वा धेरै वजन उठायो भने डिस कुच्चिन गई उछिटिन्छ र दुख्छ । तर, कसैकसैलाई बिस्तारै अलिअलि गर्दै डिस उछिटिन्छ । यस्तो चाहिँ प्राय: हुने धपेडी, भारी उचाल्दा स–साना चोटहरू थुप्रिएर यस्तो हुन सक्छ । यस्तो हुँदा सुरुमा कम्मर ज्यादै दुख्छ । पछि खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा वा दिसा गर्दा दुखाइ खुट्टासम्म पनि सर्न थाल्छ ।
१२. ठुलो आन्द्रा, प्यान्क्रियाज तथा अन्य ग्रन्थिमा हुने रोग, तथा मिर्गौला मुत्रथैलीका रोगले पनि कम्मर दुखाउँछ । तर, यस्तो हुँदा ढाड दुख्नुका साथै संक्रमित अङ्ग पनि दुख्छ । पिसाब पोल्ने, दुख्ने, रङ गाढा हुने, गनाउने आदि पनि हुन्छ ।
१३. पुरुष मूत्रग्रन्थिका रोग र महिलामा महिनावारीमा पनि कम्मर दुखाइ हुन्छ । डिम्ब, नली, पाठेघर आदि स्त्रीलिंगी रोगका कारण पनि हुन्छ । त्यसैगरी जाँघका रोग, रक्तनलीमा रगत प्रवाहमा हुने अवरोध र खुट्टाको लामो–छोटोपनाले पनि कम्मर दुखाइ हुन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट